XOG:- Kulan fashil ku dhamaaday oo dhex-maray wakiilo kala matalayay Xasan Sheekh iyo Farmaajo – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
XOG:- Kulan fashil ku dhamaaday oo dhex-maray wakiilo kala matalayay Xasan Sheekh iyo Farmaajo
Warar hoose aynu helnay ayaa sheegaya in hoteelka Jazeera ee magaalada Muqdisho uu ka dhacay kulan hoose oo ay wada yeesheen wakiilo kala metelaya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra’iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Maxamed C/laahi Maxamed Farmaajo.
Wada-hadaladaas ayaa sida la sheegay ahaa mid uu markiisii hore soo jeediyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, isagoona xilli sii horeeysay ka dalbaday Mr. Farmaajo in arrimo muhiim ah uu doonayo inuu kala hadlo.
Mr. Farmaajo ayaa markaasi kadib lasoo xiriiray wakiilo dhinaciisa ka socday oo ku sugan magaalada Muqdisho, wuxuuna ku wargeliyay inay ka war-doonaan codsiga uu madaweyne Xasan Sheekh soo jeediyay.
Waxaa markaasi kadib hoteelka Jazeera ee magaalada Muqdisho kulan seddax maalmood socday ku wada yeeshay wakiiladda labada dhinac, waxaana kulankaasi lagu soo bandhigay codsi uusoo jeediyay madaxweyne Xasan Sheekh.
Codsigaasi ayaa sida la sheegay ahaa in la isku biiriyo xisbiyada PDP oo ah kan madaxweyne Xasan Sheekh iyo kan TAYO oo isna ah kan Mr. Farmaajo, islamarkaana lagu joojiyo banaanbaxa la qorshaynayo in Farmaajo lagu soo dhaweeyo.
Wakiiladda madaxweyne Xasan Sheekh ayaa sheegay in madaxweynuhu uu balan-qaadayo in hadii uu xilka markale ku guuleysto uu Farmaajo ka dhigi doono ra’iisul wasaarihiisa, mudada afarta sano ahi ee uu xafiiska joogayo.
Wakiiladii ka socday Farmaayo oo kulankii ugu horeeyay kadib qadka teleefanka kula xiriiray Farmaajo ayaa ku wargeliyay wixii kulankii koowaad looga wada-hadlay, wuxuuna islamarkiiba ku amray in labada garab ay isu qeybiyaan, garab taageera soo jeedintaasi iyo garab kaloo kasoo horjeesta.
Wakiiladii Farmaajo oo habeenkii ugu dambeeyay la kulmay wakiilada kale ee Xasan Sheekh, ayaa waxay arrintu u dhacday sidii uu Farmaajo kusoo amray, iyagoo kadib buuq ka abuuray goobtii uu wada-hadalka ka socday.
Dhinaca kale, wakiiladii Xasan Sheekh ayaa isku dayay inay wakiilada kale ee Farmaajo ku qanciyaan inay hal saf noqdaan, balse waxaa loo sheegay in taasi aysan marnaba suurto-gal noqon doonin.
Wakiiladii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa markaasi kadib ku hanjabay in madaxtooyada Soomaaliya ay is-hortaag ku sameyn doonto banaanbixii la qaban qaabinaayay in lagu soo dhaweeynayo musharax Maxamed C/laahi Maxamed Farmaajo oo maalinta Khamiista soo socota kusoo wajahan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya.